February 2020 - Page 10 of 31 - Myanmar Fire Services Department
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပမ္မဝတီလမ်းတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Feb 19, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
(၁၈. ၂. ၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၀၃ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပမ္မဝတီလမ်းရှိ ပိုင်ရှင် ဦးသက်လွင် (အိမ်ငှား ဦးစောထူးကလေး) နေထိုင်သော(၁၀×၁၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ဓနိကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း နေအိမ်တွင် ထင်းမီးဖိုမီးဖြင့် ရေနွေးအိုးတည်ထားရာမှ အကာဓနိများသို့...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ နတ်တောင်ပြင်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
(၁၈.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၀၂ ၃၅)အချိန်ခန့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ နတ်တောင်ပြင်ကျေးရွာနေ အိမ်ရှင် ဦးမြသာ၏ (၁၅× ၉)သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း နေအိမ်တွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၀၂ ၄၀)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့် ပေါက်တောမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်(၁)စီး၊...
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ထပ်ကေးရပ်၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
(၁၈.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၀၁ ၁၀)အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ထပ်ကေးရပ်၊ ကမ်းနားလမ်းရှိ အိမ်ရှင် ဦးသောင်းငြိမ်း၏ (၁၂× ၂၅)ပေ၊ ဖက်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း နေအိမ်တွင် မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် အနီးရှိ အကာထရံသို့...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့အဝင်၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၀/၂)နှင့် (၂၀/၃)ကြား၊ မန္တလေး-မိုးကုတ်ကားလမ်းတွင် ယာဉ်တိုက� ....
editor | Feb 19, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
(၁၇.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၄ ၂၇)အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့အဝင်၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၀/၂)နှင့် (၂၀/၃)ကြား၊ မန္တလေး-မိုးကုတ်ကားလမ်းတွင် ယာဉ်မောင်း ကိုဝေလင်း မောင်းနှင်လာသော ခွေးဘီလူး အမျိုးအစား (အဖြူရောင်)ယာဉ်သည် လမ်းကြောင်းမှား၍ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောသို့ရောက်စဉ်...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ မြို့မတောင်အဆင်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၂၅/၅) အနီးတွင် ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း
(၁၇.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၀ ၄၀)အချိန်ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ မြို့မတောင်အဆင်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၂၅/၅) အနီးတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးဝိုင်းလေး မောင်းနှင်လာသော NISSAN အမျိုးအစား (အဖြူရောင်)(၆)ဘီးယာဉ်သည် ဘိလပ်မြေအိတ်များ တင်ဆောင်၍ လမ်း Site များသို့...
Page 10 of 31« « Previous...89101112...2030...Next »